03.10.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– आत्मा रूपी ब्याट्री ८४ मोटरहरूमा गएका हुनाले डिस्चार्ज भएको छ , अब त्यसलाई यादको यात्राद्वारा भरपुर बनाऊ ।”
बाबाले कुन बच्चाहरूलाई धेरै-धेरै भाग्यशाली सम्झनुहुन्छ?
जसलाई कुनै झन्झट छैन, जो निर्बन्धन छन्, त्यस्ता बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी धेरै-धेरै भाग्यशाली छौ, तिमीले यादमा रहेर आफ्नो ब्याट्रीलाई पूरा चार्ज गर्न सक्छौ। यदि योग छैन केवल ज्ञान सुनाउँछौ भने तीर लाग्न सक्दैन। कसैले जतिसुकै धुमधामसँग आफ्नो अनुभव सुनाए पनि स्वयंमा धारणा छैन भने मन खाइरहन्छ।
प्यारा रूहानी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु हुन्छ। रूहानी बाबाको नाम के हो? शिवबाबा। उहाँ हुनुहुन्छ नै भगवान, बेहदका बाबा। मनुष्यलाई कहिल्यै पनि बेहदका बाबा अथवा ईश्वर वा भगवान भन्न सकिँदैन। हुन त नाम धेरैको शिव हुन्छ तर ती सबै देहधारी हुन् त्यसैले उनीहरूलाई भगवान भन्न सकिँदैन। यो कुरा बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ। मैले जसमा प्रवेश गरेको छु, उनको यो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो। तिमी बच्चाहरूसँग कतिले सोध्छन्– तिमीले उनलाई भगवान किन भन्छौ? बाबाले पहिल्यैदेखि सम्झाउनु भएको छ– कुनै पनि स्थूल वा सूक्ष्म देहधारीलाई भगवान भन्न सकिँदैन। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्मवतनवासी नै ठहरिए। उनीहरूलाई देवता भनिन्छ। उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ नै भगवान, परमपिता। उच्च भन्दा उच्च नाम छ, उच्च उहाँको गाउँ। बाबा पनि सबै आत्माहरू सहित त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ। बैठक पनि उच्च छ। वास्तवमा कोही बस्ने स्थान होइन। जसरी ताराहरू कहीं बसेका छन् र? खडा छन् नि। तिमी आत्माहरू पनि आफ्नो तागतबाट त्यहाँ खडा हुन्छौ। यस्तो तागत मिल्छ जसले गर्दा त्यहाँ गएर खडा हुन्छौ। बाबाको नाम नै हो सर्वशक्तिमान, उहाँबाट शक्ति मिल्छ। आत्माले उहाँलाई याद गर्छ, ब्याट्री चार्ज हुन्छ। जसरी मोटरमा ब्याट्री हुन्छ, त्यसैको बलबाटै मोटर चल्छ। ब्याट्रीमा करेन्ट भरिएको हुन्छ फेरि चल्दा-चल्दा त्यो खाली हुन्छ फेरि ब्याट्री मेन पावरमा चार्ज गरेर मोटरमा राख्छन्। त्यो हो हदको कुरा। यो हो बेहदको कुरा। तिम्रो ब्याट्री त ५ हजार वर्ष चल्छ। चल्दा-चल्दा फेरि कमजोर हुन्छ। थाहा हुन्छ– एकदम समाप्त हुँदैन, केही न केही रहन्छ। जसरी टर्च मधुरो हुन्छ नि। आत्मा त हो नै शरीरको ब्याट्री। यो पनि मधुरो हुन्छ। ब्याट्री यस शरीरबाट निस्कन्छ फेरि दोस्रो, तेस्रोमा गएर प्रवेश गर्छ। ८४ वटा मोटरमा राखिन्छ त्यसैले अब बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी कति मन्द, पत्थरबुद्धि बनेका छौ। अब फेरि आफ्नो ब्याट्री भर। बाबाको यादबाट सिवाय आत्मा कहिल्यै पवित्र हुन सक्दैन। एउटै सर्वशक्तिमान् बाबा हुनुहुन्छ, जोसँग योग लगाउनु छ। बाबाले स्वयं आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ– म के जस्तो छु, कस्तो छु। कसरी तिमी आत्माको ब्याट्री मधुरो हुन्छ। अब तिमीलाई राय दिन्छु– मलाई याद गर्यौ भने ब्याट्री सतोप्रधान फस्टक्लास हुन्छ। पवित्र बनेपछि आत्मा २४ क्यारेटको बन्छ। अहिले तिमी मुलम्मा बनेका छौ। तागत बिल्कुलै समाप्त भएको छ। त्यो शोभा छैन। अहिले बाबाले तिमीलाई सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! मुख्य कुरा हो योगमा रहनु, पवित्र बन्नु। नत्र ब्याट्री भरिँदैन। योग लाग्दैन। हुन त देखावटी ज्ञानी धेरै छन्। ज्ञान त दिन्छन् तर त्यो अवस्था हुँदैन। यहाँ धेरै धुमधामसँग अनुभव सुनाउँछन्। भित्र मन खाइरहन्छ। मैले जे वर्णन गर्छु त्यस्तो अवस्था त छैन। कति फेरि योगी बच्चाहरू पनि छन्। बाबाले त बच्चाहरूको धेरै महिमा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! तिमी धेरै-धेरै सौभाग्यशाली छौ। तिमीलाई त्यति झन्झट छैन। जसका बच्चाहरू धेरै हुन्छन् उनीहरूलाई बन्धन पनि हुन्छ। बाबाका कति बच्चाहरू छन्। सबैको सम्हाल, रेख-देख गर्नुपर्छ। बाबाको पनि याद गर्नु छ। प्रियतमको याद त बिल्कुल पक्का हुनुपर्छ। भक्तिमार्गमा त तिमीले बाबालाई कति याद गर्दै आयौ– हे भगवान! पूजा पनि सबैभन्दा पहिला उहाँकै गर्छौ। पहिला निराकार भगवानको नै गर्छन्। यस्तो होइन त्यतिबेला तिमी आत्म-अभिमानी बन्छौ। आत्म-अभिमानीले फेरि पूजा कहाँ गर्छन् र!
बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– सबैभन्दा पहिला भक्ति सुरु हुँदा पहिला एक बाबाको पूजा गर्छन्। एक शिवको मात्रै पूजा गर्छन्। यथा राजा-रानी तथा प्रजा। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ नै भगवान, उहाँलाई नै याद गर्नु छ। अरू जति पनि तल छन्– ब्रह्मा-विष्णु-शंकर, उनलाई पनि याद गर्ने आवश्यकता छैन। सबैभन्दा उच्च बाबालाई नै याद गर्नु छ। तर ड्रामाको पार्ट यस्तो छ, जसकारण तिमी तल उत्रिनको लागि बाँधिएका छौ। बाबा सम्झाउनु हुन्छ– तिमी कसरी तल उत्रिन्छौ। हरेक कुरा आदिदेखि अन्त्यसम्म, माथिदेखि तलसम्म बाबाले सम्झाउनु हुन्छ। भक्ति पनि पहिला सतोप्रधान फेरि सतो-रजो-तमो हुन्छ। अहिले तिमी फेरि सतोप्रधान बनिरहेका छौ, यसैमा मेहनत छ। पवित्र बन्नु छ। आफूलाई हेर्नु छ, मायाले कहीं धोका त दिँदैन? मेरो विकारी दृष्टि त छैन? कुनै पापी विचार त आउँदैन? गायन छ– प्रजापिता ब्रह्मा त्यसैले उनका सन्तान ब्राह्मण-ब्राह्मणीहरू भाइ-बहिनी भए नि। यहाँका बाह्मणहरूले पनि आफूलाई ब्रह्माका सन्तान भन्छन्। तिमी ब्राह्मणहरू पनि भाइ-बहिनी भयौ नि। फेरि विकारी दृष्टि किन राख्छौ? ब्राह्मणहरूलाई तिमीले राम्ररी दृष्टि दिन सक्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ– ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण-ब्राह्मणी बनेर फेरि देवता बन्छन्। भन्छन् पनि, बाबा आएर ब्राह्मण देवी-देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यो ज्ञानको कुरा हो नि। हामी ब्रह्माका सन्तान भाइ-बहिनी भयौं त्यसैले कुदृष्टि कहिल्यै जानु हुँदैन। त्यसलाई रोक्नु पर्छ। यी पनि मेरी प्यारी बहिनी हुन्। त्यो स्नेह हुनु पर्छ। जसरी रगतको सम्बन्धमा स्नेह हुन्छ, त्यो परिवर्तन भएर रूहानी बनोस्। यसमा धेरै मेहनत छ। हो पनि सहज याद। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। विकारी दृष्टि राख्न सक्दैनौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– यी आँखाले धेरै धोका दिन्छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु छ। हामी आत्मा हौं। अहिले त हामी शिवबाबाका बच्चा हौं। गोदमा लिइएका भाइ-बहिनी हौं। हामीले आफूलाई बी.के. कहलाउँछौं। चलनमा फरक त हुन्छ नि। टिचरको काम हो कक्षामा सबैसँग सोध्नु। तिमीले सम्झन्छौ– हाम्रो भाइ-बहिनीको दृष्टि रहन्छ या केही चञ्चलता चल्छ? सच्चा बाबाको अगाडि सच्चा बताएनौ, झुटो बोल्यौ भने धेरै दण्ड खानु पर्छ। अदालतमा सपथ खान्छन् नि। सत्य परमपिताका अगाडि सत्य भन्छु। सच्चा बाबाको बच्चा पनि सच्चा हुनुपर्छ। बाबा सत्य हुनुहुन्छ नि। उहाँले सत्य नै बताउनु हुन्छ। अरू सबै हुन् गफ। आफूलाई श्री श्री १०८ कहलाउँछन्, वास्तवमा यो त माला हो नि, जसको जप गरिन्छ। यो पनि बुझेका छैनन्– मैले किन जप्छु? बौद्धिहरूको पनि माला, क्रिश्चियनहरूको पनि माला हुन्छ। हरेकले आफ्नै ढङ्गले माला जप्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले ज्ञान मिलेको छ। भन, १०८ को जुन माला हुन्छ त्यसमा माथि फूल त हो निराकार। उहाँलाई नै सबैले याद गर्छन्। उहाँकै यादद्वारा हामी स्वर्गकी पटरानी अर्थात् महारानी बन्छौं। नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्नु– यो हो सूर्यवंशी मखमलको पटरानी बन्नु फेरि खादीको हुन जान्छ। यस्ता यस्ता प्वाइन्टहरू बुद्धिमा राखेर फेरि सम्झाउनु पर्छ। फेरि तिम्रो नाम धेरै प्रसिद्ध हुन्छ। कुरा गर्नमा शेरनी बन। तिमी शिव शक्ति सेना हौ नि। अनेक प्रकारका सेनाहरू हुन्छन् नि। त्यहाँ पनि तिमी गएर हेर के सिकाउँछन्। लाखौं मनुष्यहरू जान्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– विकारी आँखाले धेरै धोका दिन्छन्। आफ्नो अवस्थाको वर्णन गर्नुपर्छ। अनुभव सुनाउनु पर्छ– म घरमा कसरी रहन्छु? अवस्थामा के असर पर्छ? डायरी राख– कति समय यस अवस्थामा रहन्छु? बाबाले सम्झाउनु हुन्छ बलवानसँग माया पनि बलवान भएर लड्छ। युद्धको मैदान हो नि। माया धेरै बलवान छ। माया अर्थात् ५ विकार। धनलाई सम्पत्ति भनिन्छ, जोसँग धेरै सम्पत्ति हुन्छ, अजामिल पनि धेरै उनै बन्छन्।
बाबा भन्नुहुन्छ– सबैभन्दा पहिला तिमीले वेश्याहरूलाई त बचाऊ। अनि फेरि उनीहरूले आफ्नो संगठन बनाउँछन्। हामीले त बाबाद्वारा वर्सा लिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म तिमीलाई शिवालयको मालिक बनाउन आएको छु। यो अन्तिम जन्म हो। वेश्याहरूलाई सम्झाउनु पर्छ– तपाईंको नामले गर्दा देशको यति इज्जत गएको छ। अब बाबा आउनु भएको छ शिवालयमा लैजान। हामी श्रीमत अनुसार आएका छौं तपाईंहरूको पासमा। अब तपाईं विश्वको मालिक बन्नुहोस्। देशको नाम प्रख्यात गर्नुहोस्, हामीले जस्तै। हामी पनि बाबालाई याद गरेर पवित्र बनिरहेका छौं। तपाईंले पनि यो एक जन्म विकारी काम छोडिदिनुहोस्। दया त गर्नु छ नि। फेरि तिम्रो नाम धेरै प्रसिद्ध हुन्छ। भन्छन्– यिनमा त यस्तो तागत छ, जसले यिनीहरूलाई यस्तो विकारी धन्दाबाट छुटाइदिए। सबैको संगठन छ। संगठन बनाएर सरकारद्वारा जे चाह्यो लिन सक्छौ। त्यसैले अब यस्ता विकारीहरू जसले देशको नाम बदनाम गरेका छन्, उनीहरूको सेवा गर। तिम्रो पनि संगठन धेरै पक्का हुनुपर्छ। १०-१२ जना आपसमा मिलेर जाउन् र सम्झाउन्। राम्रा माताहरू पनि साथमा हुनुपर्छ। कोही नयाँ युगल छन् भने उनले भनून्– हामी पवित्र रहन्छौं। पवित्र रह्यौं भने नै विश्वको मालिक बन्छौं। त्यसैले किन पवित्र नबन्ने। सारा ग्रुप जाऊन्। गएर धेरै नम्रतापूर्वक भन्नु छ, हामी तपाईंलाई परमपिता परमात्माको सन्देश दिन आएका छौं। अब विनाश सामुन्ने खडा छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म सबैको उद्धार गर्न आएको छु। तिमी पनि यो एक जन्म विकारमा नजाऊ। तिमीले सम्झाउन सक्छौ– हामी ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारीहरूले आफ्नो तन-मन-धनले सेवा गर्छौं। हामीले भीख त माग्दैनौं। ईश्वरका बच्चा हौं। यस्ता-यस्ता योजना बनाऊ। यस्तो होइन– तिमीले मदत गर्न सक्दैनौ। यस्तो काम गर जसमा वाह-वाह होस्। मदत दिने हजारौं निस्केर आउने छन्। आफ्नो संगठन बनाऊ। मुख्य-मुख्यलाई छान, सेमिनार गर। बच्चाहरूलाई सम्हाल्नेहरू त धेरै निस्कन सक्छन्। तिमी ईश्वरीय सेवामा लाग। यस्तो विशाल दिल हुनुपर्छ जसले गर्दा तुरुन्तै सेवामा निस्किन सकून्। एकातिर यो सेवा र अर्को कुरा गीताको, यी कुरामा चर्चा गर। तिमीले पढ्छौ नै यी लक्ष्मी-नारायण बन्नको लागि। यहाँ तिमी बच्चाहरूको आपसमा मतभेद हुनु हुँदैन। यदि कुनै कुरा बाबासँग लुकाउँछौ, सत्य बताउँदैनौ भने पनि आफ्नै नोक्सान गर्छौ अझै सयगुणा दण्ड चढ्छ। अच्छा!
१) हामी प्यारा बाबाका सन्तान हौं, आपसमा स्नेही भाइ-बहिनी भएर रहनु छ। कहिल्यै पनि विकारी दृष्टि राख्नु हुँदैन। दृष्टिमा कुनै पनि चञ्चलता भयो भने सर्जनलाई सत्य कुरा बताउनु छ।
२) कहिल्यै पनि आपसमा मतभेदमा आउनु हुँदैन। विशाल दिल बनाएर सेवा गर्नु छ। आफ्नो तन-मन-धनबाट, धेरै-धेरै नम्रताका साथ सेवा गरेर सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ।
आफ्नो श्रेष्ठ जीवनद्वारा परमात्म ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रुफ दिने माया प्रुफ भव
स्वयंलाई परमात्म ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण वा प्रुफ सम्झनाले माया प्रुफ बन्छौ। प्रत्यक्ष प्रुफ हो– तिम्रो श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबैभन्दा धेरै असम्भवबाट सम्भव हुने कुरा प्रवृत्तिमा रहेर पर-वृत्तिमा रहनु हो। देह एवं देहको दुनियाँको सम्बन्धबाट पर (न्यारा) रहनु। पुरानो शरीरको आँखाबाट पुरानो दुनियाँका वस्तुहरूलाई देखेर पनि नदेख्नु अर्थात् सम्पूर्ण पवित्र जीवनमा चल्नु– यही परमात्मालाई प्रत्यक्ष गर्ने वा माया प्रुफ बन्ने सहज साधन हो।
अटेन्शन रूपी पहरेदार ठीक छ भने अतीन्द्रिय सुखको खजाना गुम्न सक्दैन।